Iftiinka Caasimadda (Maqaal) – Radio Daljir
Iftiinka Caasimadda (Maqaal)
Maarso 9, 2018 4:15 b 0
Muqdisho waa astaanta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waana hal-bowlaha horumarka iyo dib u soo kabashada qarankeenna iyo himilooyinka fog ee bulshadeena.
Caasimaddu waxa ay saldhig u tahay dhammaan hay’adaha dowliga ee dalka sida sharci dajinta, fulinta iyo adeegda garsoorka, talisyada ciidanka qalabka sida iyo safaaradaha dalalka saaxiibada lah Soomaaliya.
Si magaaladu u noqoto mid hanata dhammaan dhinacyada kala duwan waa in ay hesha hoggaamiye fahmi kara halka ay maanta joogto, waayihii hore iyo meesha ay ku socoto caasimadda diiday dib u dhac iyo kala qub-qubnaan bulshadeed.
Kasoo bud-dhige u noqda in caasimad mar kale hoggaamiso caasimadaha kale ee gobolka iyo baratanka horumarineed ee ka jira mandaqida geeska afrika, taasoo korniinshaha hadda uu u muuqdo mid xowli ku socda.
Madaxweynaha dalkeena oo maanka ku haya ahmiyadda ay leedahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa 21-1-2018 waxaa xilkeeda ku aaminay aqoon yahan siyaasi ah oo horumarro kala duwan gaarsiiyay hay’adihii uu soo maamulay ayna ugu dambeysay wasaaradda warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (eng Yariisow).
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir kuma koobna siyaasi ku xeel-dheer siyaasadda iyo howlaheeda sidoo kale waa injineer aaminsan in uu canshuurta dalka wax ku bartay una bartay dalka si uu kaalin uga qaato horumarka socda.
Wakhtigaan Muqdisho waa ay nasiib badan tahay waayo waxaa ay heshay qofkii mar kale ka shaqeyn lahaa xoojinta kaabayasha dhaqalaha oo ay ugu horeyaan dhismaha waddooyinka ka fekeridda ballaarinta marinada muhiimka ah iyo dib u qaabeynta howlaha la xiriira dhismayaasha kala duwan.
Inkastoo aqoon karti iyo awood maamul uu leeyahay guddoomiyaha haddana waxaa jira marxalado u baahan in laga wada shaqeyo oo ay ugu horreyaan amniga caasimadda kasoo muhiim u ah xalisoonida iyo halbeegga horumarka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada iyo bulshada ku nool,Waxaana jira dood kala duwan oo ku saabsan sidee loo hagaajin kara amniga caasimadda dalka oo haddii Muqdisho xasisho dallkuna la xasilayo.
Amniga caasimadda waa furaha koowaad ee mustaqbalka dal dhisan oo soo dhoweeya cid walba oo daneyneysa maalgelinta dalkeena kuwasoo doonaaya in aan kala faa’ideysana.
Dal walba waxaa uu dalalka kale kaga duwan yahay hadba inta shacabkiisu fahamsan yahay dowladnimada, sareynta sharciga iyo dareenka lahaansha dalkooda.
Guddoonka gobolka oo arrinta ka duulayo ayaa xooga saaraya dhismaha garaadka shacabka iyo sare u qaadidda wacyi-galinta bulshada si ay u hantaan amniga caasimadda Jamhuuriyadda.
Isbedalka maamul ee gobolka waxaa uu horseeday shaqo aan lahayn wakhti oo ay u simman yihiin howl-wadeena dowladda hoose ee Muqdisho, guddoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda iyo dhammaan qaybaha Mudada uu hogaanka cusub hayey talada gobolka waxaa isbedal lagu sameyay hannaanka amniga gobolka, iyadoo lagu saleeyey qorshaha amniga Qaranka iyo midka xasillinta magaalooyinka dalka.
Waxaa isha lagu hayaa horu-tebinta muuqata sida amniga, hasa yeeshee waxaa fulin iyo howlgelid u baahan arrimaha Barakacayaasha, nidaamka ku dhaqanka sharigayada u deggan caasimadda, ballaarinta adeegyada aas-aasiga sida waxbarashada, xarumaha caafimaadka iyo doorasho qof iyo Cod ah o xor ah oo ka soo bilaabata gole deegaan, iyadoo la waafajinayo sida uu dhigayo Dastuurka iyo haddii la dhammeeyo maqaam ay yeelayo caasimadda Soomaaliya.
Howlgalka socda waxaa qeyb weyn ka ah arrimaha wacyigelinta dadweynaha, taas oo u muuqata in guddoomiye Yariisoow uu ku darsaday ajendeyaashiisa koowaad, waxaa muhiimad gaarna la siinayaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Rumeyso dhammeystirka doorasho caasimaddu gaarto
Xasilinta amniga, sugaanta waxbarashada dadka danta yar, howlgelinta goobaha adeegga caafimaadka iyo u ololeynta maqaamka caasimadda waxaa ay wadada u xaarayaan doorasho xor ah oo qof iyo cod ah, kana dhacda magaalada Muqdisho oo ah caasimadda taarikhi ah, kummanaan sanno ka horna maamullo ay soo mareyn, hasa yeeshee taarikhu ay geli doonto hannaanka doorasho ee markii ugu horreysa lagu han weyn yahay in caasimadda iyadu isu qabato, kuna dhaqanto mustaqbalka.
Muqdisho oo la mataan ah magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga waxa ay yeelan doontaa saddex waiji oo laba mid ah Istanbul ay ku mataanowdey magaaloo Ganacsi, caasimad horumarsan iyo magaalo Dalxiis oo dunidu ay soo booqato, halka Ankara ay ka raaci doonto isu dhowaanshaha Maqaamka, hab-maamuuska iyo marti-soorka hoggaamiyeyaasha dunida ama dalalka caalamka.
Muwaadin walba oo caasimadda ku nool waxa uu aaminsan yahay in aysan dib u laabanneyn Muqdisho, hoggaanka maanta ee caasimadduse waxa uu hal ku dhiggiisa shaqo ka dhigtay in caasimaddu ay gaarsiin doonaan doorasho lagu kalsoon yahay oo dimuquraaddi ah. qeybtaada qaado si aan aad ugu guuleysato hammigaaga horumar ee aad la jeceshahay caasimadaada.
W/Q:-Sharma’arke Maxamed Warsame
Magaaladda Muqdisho xalay lagu soo gabagabeyaay Maalinta Haweenka
Madaxweyne Waare oo Jowhar Ku Qaabilay Saraakiil Ka Socotay Kana Wada Hadlay Caawinta Dadka Abaartu Ay Saameysay